Yintoni ofuna ukuyilindela kwinkampani yobuchule bokusebenza?
Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni inkampani yokukhangela injini yosesho? Kule mihla, uchwepheshe we-SEO uvuselela imibuzo ephakamileyo kuba abaqeqeshi benza imisebenzi enzima eyanceda ukubeka i-website yakho phezulu kwi-SERP. Ukuze siqonde oko sifuna ukukulindela kwinkampani yokulungisa, kufuneka size emva kwesimo. Kule nqaku, ndiya kukunika ingqiqo kwi-injini yokupakisha injini kwaye ubonise ukuba yiziphi i-SEO iingcali ezenzayo ukuphucula amawebhusayithi abo abaxhasi.
Ndingathanda ukuqala le nqaku ngokubonisa ukuba kukho ezine ezineendlela ezisemgangathweni: i-organic (ukusesha), ukuthunyelwa, ukuhlawula kunye nentlalo. Nangona kunjalo, i-traffic yezithuthi yindlela ejoliswe kuyo - registration rights. Kuthetha ukuba i-traffic ejoliswe ngakumbi ekufumaneni ukukhangela amagama akho asemgangathweni asemgangathweni, amathuba amaninzi okuguqula ukutyelelwa ekuthengiseni kunye neengeniso.
Ngokomzekelo, unemveliso ethile, kwaye ungathanda ukuphakamisa it online. Ukhethile igama le-domain kwaye uqeshe abaphuhlisi bewebhu abaqeqeshiweyo abaza kwakha iwebsite okanye iphepha lokuhlahlela. Isiza sakho siqalisiwe. Nangona kunjalo, ewe, awufumani ukuhamba kweemoto kwi-domain yakho kanye kanye. Kwaye uqala ukuzibuza le mibuzo elandelayo: "Ngubani na owaziyo ngaphandle kwam nomyalelo wam ukuba ndiqalise iwebhusayithi?", "Ngaba abasebenzisi bayazi into ethile ngombala wam? umthombo wam web? ".
Yonke le mibuzo ingaphendulwa ngumcebisi we-SEO okanye inkampani yokulungisa. Ngoko, isigaba esilandelayo emva kokuqaliswa kwewebhusayithi kukulungiswa kwewebhusayithi ngokubhekiselele kuyo yonke imigangatho ye-injini yokusesha. Ukuba uthatha isigqibo sokwandisa ukufikelela kweemarike kwaye uphakamise izinga lokuguqulwa kwakho, ngoko kufuneka uqeshe inkampani efanelekileyo yokulungisa. Iqela leengcali liya kukukhokela endleleni yakho eya empumelelweni.
Yiyiphi inkampani yokwenza kakuhle?
Iinkampani ze-SEO zinendlela eyahlukileyo kwiprojekthi nganye abayisebenzayo. Ngaphambi kokuqalisa umkhankaso wokwenza uphando, baqhele ukuqhuba uhlalutyo lwe-market niche and research. Indlela yokwenza iprojekthi ethile ye-intanethi iya kuxhomekeka kwimeko yephulo, i-market niche, ibhajethi kunye nezinye izinto eziphambili.
Okokuqala, inkampani yokwenza umsebenzi yenza uhlalutyo lwesakhiwo sesiza. I-Google kunye nezinye iinjongo zokusesha ezidumileyo njenge-Yahoo kunye neBing zigxininisa ukuba zibeka iindawo ezingcono ezilungiselelwe kubasebenzisi kunokuba zifune iinjinjini. Iwebhusayithi yakho kufuneka icaciswe kakuhle kwaye ilula ukuhamba. Nangona kunjalo, kufuneka kwakhona ihlelwe ngokufanelekileyo kwiinjine zokukhangela ukuhambisa umxholo wakho.
Ngoko, iingcali ze-SEO zibonelela izicwangciso ezilandelayo ukuphucula isakhiwo sakho kwisayithi:
lungise iziphoso zendawo;
usebenzise iiRobhothi. fayile ye txt;
ukuphucula isimo sakho senkcazo;
isebenzise iipempile ze-XML;
phucula isantya sekhasi lakho;
ukwandisa izinto zeemeta.
Isigaba esilandelayo sokuphuculwa kwewebhusayithi kukuhlalutya umxholo. Ngalolu hlobo, ochwepheshe be-SEO basebenzisana kunye nabathengisi bezinto zokuthengisa ukudala umxholo oyingqamene nefanelekileyo. Ngaphezu koko, baqwalasela umxholo osukhona kwiziko lakho kwaye uphucule ukuba kukho imfuneko. Ngaphezu koko, i-SEO iingcali zixazulula ezifana nemiba njengomxholo wokuphindaphindiweyo, iphepha elingekhoyo, kunye namaphepha ahlukileyo.